Sagarmatha Zone | युवा अघि सर्छ, देश अघि बढ्छ | Page 2
Category Archives: Sagarmatha Zone
विवेकशील पदयात्रीहरू लुम्बिनी अंचल प्रबेश- देश-व्यापी पदयात्राको २१ औं दिनमा (३ जेठ, २०७०)। शुभकामना र शुभयात्रा सबै पदयात्री साथीहरूलाई ।
मेची अंचलबाट हिंडेका पदयात्रीहरू लुम्बिनी अंचलमा । महाकालीबाट हिंडेका पदयात्रीहरू राप्ती अंचलमा ।
पदयात्रीहरू- अंगराज र पुकार ।
संयुक्त पुर्वी टोली- २१ औं दिनमा- चितवनको भरतपुरबाट हिंड्दै नवलपरासी जिल्लाको कावासोतीमा पुगी बिश्राम – संयुक्त टोलीले जेठ ३- बिहान चितवन जिल्लाको भरतपुरबाट यात्रा शुरु गरि, नारायणगढ बजार र नारायणी नदी पुल पार गरेर नवलपरासी जिल्ला प्रबेश गरे । नारायणीको पुल तरेपछि अब पुर्वी टोलीले नारायणी अञ्चललाई बिदा गर्दै लुम्बिनी अञ्चल प्रवेश गरेको छ । नवलपरासीको गैंडाकोट, रजहर हुंदै र बिच बिचका चोकहरुमा सडक सन्देश कार्यक्रम गर्दै टोलीका पदयात्री साथीहरुले साँझ ८ बजे नवलपरासी जिल्लाको कावासोतीमा पुगी नवलपुर गेष्ट हाउसमा बिश्राम गरे । पदयात्रीहरूलाई खाना र बासको व्यवस्था गरिदिनुभएकोमा ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक कावासोतीका शाखा व्यवस्थापक तपेन विष्टजीलाई हार्दीक धन्यवाद । साथै शुक्रवार दिनभर हामीलाई अमुल्य साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने- सबैलाई हार्दिक धन्यवाद । (पुर्वटोलीकोपुर्णयात्राविवरणयो लिंकमा हेर्नुहोला)
संयुक्त पश्चिम टोली– राप्ती अंचल प्रबेश, दाङ जिल्लाको लमहीमा बिश्राम – जेठ ३ गते संयुक्त पश्चिम पदयात्रा टोलीका साथीहरुले राप्ती अन्चलको दाङ जिल्लाको पुर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने लमही बजारमा पुगी बिश्राम गरे । लमही बजारमा, बिभिन्न पेशाका युवाहरुले स्व-स्फुर्तरुपमा हामीलाई उत्साहपुर्वक साथ दिए बजारको चोकमा गरिएको सडक सन्देश कार्यक्रममा । । टोली लुम्बिनी जाने क्रममा अगाडी बढ्दैछ । नेपाललाई शान्त र संबृद्ध बनाउने हामी सबैको अठोटलाई साकार पार्न बिभिन्न पेशा (चिकित्सक, ईन्जिनियर, शिछक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकिल, व्यापारी, युवा उधमीहरु), का युवाहरुले हामीलाई साथ दिंदैछन् निरन्तर ।
लमही बजारमा गरिएको ‘सडक सन्देश’मा सहभागी युवाहरुको साथमा पदयात्रीहरु
(पुर्वी टोलीकी पदयात्री साथी ज्ञानु बरालकै शब्दमा २१औं दिन जेठ ३ गते बुधबारको यात्रा विवरण –पदयात्राको २१औं दिन जेठ ३ गते शुक्रबार – भरतपुर चितवन बाट कावासोती नवलपरासी सम्म ।
“बिहान ६ बजे बास बसिएको होटलबाट निस्किएर नारायणघाट तर्पm अगाडी बढ्यौ । नारायणघाटको भरतपुर विमानस्थल नजिकै बाट सडक सन्देश शुरु गर्दै र हाकिम चौक, पुल्चोक हुदै नारायणी नदी पार ग¥यौ । नारयणी नदी संगसंगै हामीले नारयणी अञ्चल पार गरेर लुम्बिनी अञ्चल प्रवेश गरिसकेका थियौ ।
करिब ७ बजे तिर नवलपरासी जिल्लाको प्रवेश क्षेत्रमा खाजा खायौ । अगाडी बढ्ने क्रममा गैंडाकोटमा एक जना सहयोगीले २ बोतल पानी र भुजिया हाम्रा निम्ति दिनु भयो । मध्य दिनको १२ः१५ बजे तिर अर्का मनकारी भेट्यौ । मुकुन्दपुर – ३ का स्थाई बासिन्दा शुक्र प्र. रेग्मीले हामीलाई नारायणी नदी छेउ तिरै देख्नु भएको रहेछ । काम विषेशले नारायणघाट गई फर्किनु भएका वहाँले आफू फर्किदा सम्म हामीले वहाँको घर कटेका छैनौ भने भेट्ने र पानी पिलाउने अठोट गरि सक्नु भएको रहेछ । पुर्व गा.वि.स. सचिव पनि रहनु भएका वहाँले पानी पिलाएर हामी संग भलाकुसारी पनि गर्नुभयो ।
करिब २ बजे हामी रजहर पुग्यौ । खाना खाने उद्देश्य रहे पनि शुक्रबार त्यहाँको बजार बन्द हुने रहेछ, सबै पसल बन्द थिए । पुष्पाञ्जली फेमली रेष्टुराँ भने खुल्ला रहेकाले त्यहाँ मःमः र चिया खायौ । सोही ठाँउमा एक अवकास प्राप्त ईन्जिनियरसंग पनि भेट भयो । आनन्दवन ५, रुपन्देहीका रघुनाथ शर्मा हाल ओभरसियरहरुलाई पढाउने र विभिन्न सिंचाई तथा जलविद्युत आयोजनामा घुम्दै पुग्ने र स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्ने गर्नुहुदो रहेछ । व्यवस्थापनमा समेत स्नातकोत्तर गर्नु भएका वहाँले परियोजनाहरुमा व्यवस्थापन पनि गर्नु हुदो रहेछ । हामीसंग भेट भई रहदा वहाँ भरतपुर तिर गईरहेको पनि बताउनु भयो ।
दिउसो ३ः३० बजे हामी सि.जी. (चौधरी ग्रुप) को कारखाना पुग्यौ । १२ वर्ष देखि सो कम्पनीमा कार्यरत हाल उत्पादन व्यवस्थापक (प्रोडक्सन म्यानेजर) तारा श्रेष्ठसंग सम्पर्क भईसकेको थियो । शुक्रबार आगुन्तुकहरुलाई घुम्न मिल्ने नियम रहेकाले वहाँले कर्मचारी विनोद चौधरीलाई हामीलाई कारखाना घुमाई दिन भन्नु भएको रहेछ । कारखाना घुम्दै गर्ने क्रममा विवेकशील नेपालीका गोविन तिम्सीनाका मित्र रुपक काफ्लेसंग भेट भयो । हाल सोही कम्पनीको पेय पदार्थको उत्पादनमा गुणस्तर नियन्त्रण (क्वालिटि कन्ट्रोल) का लागी काम गरिरहेका रुपकले हामी सबैलाई रियो जुस दिनु भयो । उत्पादन व्यवस्थापक तारा श्रेष्ठको विचारमा सबैजना आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । लोभ लालच र भ्रष्टाचार नै मुल समस्या मान्ने श्रेष्ठ हामी नेपाली काम भन्दा धेरै कुरा गर्ने भएको ठान्नुहुन्छ ।
बिच बिचका चौकहरुमा सडक सन्देश गर्दै निरन्तर हिडेर हामी साँझ ८ बजे नवलपरसी जिल्लाकै कावासोती भन्ने ठाँउमा आईपुग्यौ । विवेकशील नेपालीका सदस्य ह्तेश पन्तसंग भेट भयो र वहाँले हामीलाई भोली दिनभरी साथ दिने वाँचा पनि गर्नुभयो ।
पदयात्री साथी ज्ञानु बरालका एक मित्रको सहयोगमा ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक कावासोतीका शाखा व्यवस्थापक तपेन विष्टले हाम्रो निम्ती आजको खाना र बस्नको व्यावस्था गरि सक्नु भएको रहेछ । आजको बास कावासोतीमा रहेको नवलपुर गेष्ट हाउसमा भयो । भोली बिहान ७ बजे यहाँका स्थानिय पत्रकारहरुसंगको भेटघाट पनि तपेन विष्टले समन्वय गर्नुभएको छ ।
आजको यात्राको क्रममा भेट हुनु भएका र सहयोग गर्नु भएका सम्पुुर्ण मनकारीहरुलाई पदयात्री तथा विवेकशील नेपालीको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद ।”
लुम्बिनीतर्फ निरन्तर अघि बढ्दैछ- विवेकशील पदयात्रा, २० औं दिनमा (२ जेठ, २०७०)।
बैशाख १४ मा शुरु भएको विवेकशील पदयात्राले २० औं दिन पुरा गरि निरन्तर अघि बढ्दैछ।
संयुक्त पुर्वी टोली- चितवन जिल्लाको भरतपुरमा बिश्राम – संयुक्त टोली २० औं दिन, जेठ २- बिहान चितवन जिल्लाको ज्यामिरे बाट यात्रा शुरु गरि, रत्ननगर-टांडी, टिकौली जंगल हुंदै, भरतपुर-नारायणगढ पुगी बिश्राम गरे पदयात्री साथीहरूले । बिहिवार हामीलाई अमुल्य साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने- युनिक एकेडेमी टांडीका संस्थापक प्रधानाध्यापक जिवनराज वाग्ले, गणेश चोकका ध्रुव अधिकारी भरतपुरका विवेकशील साथी यम मल्ल ठकुरी, उधमी श्रीक्रिष्ण तिमल्सिना, भरतपुरको महालक्ष्मी होटल र नारायणगढ जेसिजका प्रतिनिधिहरू लगातय सबैलाई हार्दिक धन्यवाद । (पुर्वटोलीकोपुर्णयात्राविवरणतलहेर्नुहोला)
संयुक्त पश्चिम टोली– बांके जिल्लाको रिहारमा बिश्राम – जेठ २ गते बिहिबार संयुक्त पश्चिम पदयात्रा टोली, भेरी अन्चलको बाँके जिल्लाको पुर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने रिहारमा बिश्राम गरे । टोली लुम्बिनी जाने क्रममा दाङ जिल्लातर्फ अगाडी बढ्दैछन् ।
पुर्वी टोलीकी पदयात्री साथी ज्ञानु बरालकै शब्दमा २०औं दिन जेठ २ गते बुधबारको यात्रा विवरण-विवेकशील पदयात्राको २०औ दिन: जेष्ठ २ गते बिहीबार – चितवन को ज्यामिरे बाट भरतपुर सम्म –
“बिहान चितवनको ज्यामिरेका युवाहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेर अगाडी बढेका हामी विवेकशील पदयात्रीहरु १० बजे युनिक एकेडेमी का संस्थापक प्रधानाध्यापक तथा बुढानिलकण्ठ स्कुलमा पनि अध्यापन गराइसक्नु भएका जीवन वाग्लेज्युको सौजन्यमा युनिक एकेडेमीमा नै गएर खाजा खायौँ ।
त्यसपछि ११:४५ मा रत्ननगर-७,गणेश चोकमा पुग्यौँ जहाँ ध्रुव अधिकारीज्युको टोलीले हामीले फुल दिएर स्वागत गर्नुभयो। ध्रुबज्युले एजुकेट नेपाल इनीसियेटीव भन्ने संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ जसले चेपाङ समुदायको बालबालिकाहरुलाई स्टेसनरी सामाग्री दिएर पढ्नलाई मद्दत गर्दोरहेछ। ध्रुबज्युले हामीलाई अर्को एक जिम्वेवारी पनि दिनुभयो। उहाँ भाषाविद हुनुभएकोले उहाँ तथा उहाँका साथीहरुले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर चितवनबाट महाकालीसम्म मोटरसाइकल यात्रा गर्नुभएको रहेछ। उहाँले अब यो झण्डा तपाईहरु लुम्बिनी पुर्याइदिनुहोस भनेर हामीलाई झण्डा हस्तान्तरण गर्नुभयो। साथै एजुकेट नेपाल इनीसियेटीव तथा त्यहाँ उपश्थित मनकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट आर्थिक सहयोग पनि पायौँ। धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुवजी, उहाँको संस्था, गणेश चोकका स्थानियवासीहरुलाई तथा ध्रुवजीको सम्पर्क गराएर सहयोग गर्नुहुने लक्ष्मी तामाङज्युलाई।
गणेश चोकबाट हिडेपछि हामी दिउसो २:४५ मा भरतपुरको महालक्ष्मी होटलमा पुग्यौँ जहाँ यम मल्ल ठकुरी ज्युको सौजन्यमा बेलुकाको बासको व्यवश्था पायौँ। यसका लागि विवेशील पदयात्रा टोली यमज्यु प्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। होटलको कोठामा नै आएर बिक्रम पन्तज्युले प्रशासनबाट कुनै पनि बेला सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्दछौँ।
यात्राको क्रममा टिकौली जंगल पुग्न लाग्दा एउटा कुकुर हामी संगै हिड्यो । हामी बिश्राम गर्दा वरीपरी बस्ने र हामी हिड्न थाले पछि हिड्न थाल्ने सो कुकुर करिब ११ कि.मी. संगै हिडेर भरतपुर बसपार्कको महालक्ष्मी होटल सम्म आईपुग्यो । पत्रकारहरुसंगको भेटघाटको लागी रहेको कार्यक्रम सक्ने वित्तिकै सो कुकुर अझै छ ? कि भनेर हेर्न आउदा चै हराईसकेको थियो । यती लामो दुरीसम्म त्यसले हामीलाई पछ्याउनुको रहस्य चै बुझ्नै सकिएन ।
पत्रकार सम्मेलनको व्यवश्था महालक्ष्मी होटलमा नै मिलाइएको रहेछ। ३:३० मा पत्रकार सम्मेलन भयो जसमार्फत स्थानीय प्रेस तथा टेलिभिजनबाट हाम्रो सन्देश धेरै जनतामाझ पुग्दैछ। पत्रकार सम्मेलनमा नै श्रीक्रिष्ण तिमल्सिनाज्युले हामी पदयात्रीहरुलाई खादा ओडाएर सम्मान गर्नुभयो र रु १५०० आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो। निम्न आर्थिक अवश्थाको प्रिष्ठभुमी भए पनि कुखुरा पालनमा नै पहिले काम गर्दाको तलब तथा पार्ट टाइम ब्यबसायबाट संकलित पुँजीबाट ३ वर्षदेखी आफ्नै पोल्ट्री सप्लाएर्स व्यवसाय गर्दै आउनुभएका श्रीक्रिष्ण तिमल्सिनज्युले भन्नुभयो, “युवालाई अगाडी सार्नुपर्छ। जे गर्छन युवाले गर्छन्। राजनीतिमा पनि युवा नै हुनुपर्छ।” लाखौँलाख धन्यवाद श्रीक्रिष्ण तिमल्सीना ज्युलाई।
साँझ ६ बजे मा हामी नारायणगढ जेसिजमा पुग्यौ र खेमराज भट्टराई, मदन घिमिरे, नवराज फुयाल, बासुदेव दवाडी, गोपाल भट्टराई लगायत धेरै जेसिजका व्यक्तित्वहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्यौँ। नारायणगढ जेसिजबाट हामीलाई रु १५०० को आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त भयो। नारायणगढ जेसिजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
जेसिजकै कार्यक्रममा भेटिनु भएका जेसी गोपाल भट्टराई वि.स. २०५० देखि एक वर्कसप चलाउनु हुदो रहेछ । वर्कसपमा काम गर्नेहरु प्रति समाजले फरक धारणा राख्दै यसलाई पछाडी परेको र घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको वहाँको बुझाई छ । हाल ४० जनालाई रोजगारी प्रदान गरिरहनु भएका वहाँलाई शिक्षा मात्र नभएर सीपलाई पनि प्रथमिकता दिनु पर्नेमा विश्वास राख्नु हुन्छ । उच्च मा.वि. सम्मको अध्ययन गर्नेहरुसंग सीप पनि हुने हो भने कसैको मुख ताक्नु नपर्ने बताउने वहाँ सबै तिर आय हुन सक्ने ठाँउ देख्नु हुन्छ । “आय गर्ने ठाँउमा समस्या छन्” भन्नेहरुको लागि वहाँ “समस्या भित्रै पनि आय हुन्छ” भन्ने सन्देश दिन चहानुहुन्छ । अहिलेका युवाहरु चै सजिलै आय गर्ने उपाय खोज्दै जादा कुलतमा फस्न पुगेको वहाँको ठम्याई छ ।
त्यसपछि, हामी होटलमा फर्कियौँ र अहिले बास बस्दैछौँ। दिनभरीमा विभिन्न ठाउँमा भेटिनुभएका र यात्राका लागि शुभकामना दिनुहुने सबै चितवनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा तपाईँहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्न पाइयोस् भन्ने आशा राख्दछौँ।”
This entry was posted in Bagmati Zone, Bheri Zone, Janakpur Zone, Karnali Zone, Koshi Zone, Mahakali Zone, Mechi Zone, Sagarmatha Zone, Seti Zone on May 17, 2013 by .
‘युवा अघि सर्छ, देश अघि बढ्छ’ विवेकशील पदयात्रा, १९ औं दिनमा (१ जेठ, २०७०) – संयुक्त टोलीहरु लुम्बिनीतर्फ अगाडी बढ्दै ।
संयुक्त पुर्वी टोली– चितवन जिल्लाको ज्यामिरेमा बिश्राम – मेचीबाट हिंडेको टोली र बागमतीबाट हिंडेका दुबै टोलीको हेटौंडामा भेट भई अब दुबै संगै अगाडी बढ्दैछन्। संयुक्त टोली १९ औं दिनमा, जेठ १- बिहान ५;३० बजे मकवानपुर जिल्लाको मनहरी (सिमपानी) बाट यात्रा शुरु गरि, सुनाचरी, पिप्ले हुंदै चितवन जिल्ला प्रबेश पछि, भण्डारा, खैरेनी, बैरेनी हुदै ६;३० बजे तिर सिमलटाडीँ आइपुग्दा परेको पानी झेल्दै साँझ ७;३० बजे चितवनकै ज्यामिरेमा पुगी साथी बासु बुर्लाकोटीको निवासमा बिश्राम गरे पदयात्री साथीहरूले । ज्यामिरेमा सबै ८ जना पदयात्रीका निम्ति खाना र बस्नको व्यवस्था गरिदिनुभएमा हार्दिक धन्यवाद साथी बासुजी । (मेचीटोलीकोपुर्णयात्राविवरणतलहेर्नुहोला)
संयुक्त पश्चिम टोली– बांके जिल्लाको अगैयामा बिश्राम – जेठ १ गते, महाकाली र कर्णाली टोलीको कोहलपुरमा भेट् भयो र तत्पस्चात संयुक्त पश्चिम टोलीमा परिणत भई लुम्बिनीतर्फ पाईला सार्दैछन् पदयात्री साथीहरु। संयुक्त पश्चिम टोलीका साथीहरुले बुधवार बिहान १०:३० बजेतिर पुर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने मुख्य शहर-कोहलपुरमा सडक संदेश कार्यक्रम सम्पन्न गरे । उक्त सडक संदेश कार्यक्रममा स्थानीय युवाहरुको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो। सबै सहभागीलाई धन्यवाद । कोहलपुरबाट टोली दाङ जिल्लातर्फ अगाडी बढ्दै, राति बांकेकै अगैया आईपुगेर बास बसेका थिए।
पुर्वी टोलीकी पदयात्री साथी ज्ञानु बरालकै शब्दमा १९औं दिन जेठ १ गते बुधबारको यात्रा विवरण- पदयात्राको ‍-बिहान ५ः३० बजे हिजो बास बसेको मकवानपुर जिल्लको मनहरी गा.वि.सको सिमपानीमा रहेको तासी फुल्चुंग छोइलिंग गुम्बाबाट निस्कीएर यात्रालाई निरन्तरता दियौ । मनहरी गा.वि.स. भवनसंगै रहेको एक चिया पसलमा गुम्बाका सचिव राजु मोक्तानसंग बसेर चिया पिउदै अघिल्लो दिनको खाजा, खाना र बासको प्रबन्ध गरिदिनु भएकोमा वहाँ साथै राम कुमार पाख्रिन जी लाई धन्यवाद दियौ । सोही ठाँउमा आईपुग्नु भएका मुक्तिनाथ बास्कोटाले पदयात्राको बारेमा जिज्ञासा राखे पछि हामीले पदयात्रा र विवेकशील नेपालीको बारेमा बतायौ । लगत्तै वहाँले रु. १,०००।– यात्राको सहयोगार्थ प्रदान गर्नु भयो । वहाँलाई पनि सहयोगको लागी धन्यावाद दिई सके पछि पुनः यात्रालाई निरन्तरता दियौ । यहाँ सम्म सहयोग गर्ने राजु मोक्तान, राम कुमार पाख्रिन र मुक्तिनाथ बास्कोटालाई सह्दय धन्यवाद ।
अगाडि बढ्ने क्रममा श्री राष्ट्रिय नि.मा.वि. का प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त रिमालसंग भेट भयो । विद्यार्थीलाई पढाई संगै खेलकुद र अन्य गतिविधीका लागि पनि प्रोत्साहन गरि रहने चितवन घर भएका यी प्र.अ.लाई विद्यार्थीलेहरुले पनि निकै मनपराउने रहेको कुरा विद्यार्थीहरुबाटै थाहा भयो । आगामी २ वर्षमा मा.वि. बनाउने तयारीमा जुटेका प्र.अ.ले विद्यार्थीलाई टाईको व्यवस्था पनि गर्दै रहेछन् । हामीलाई लाग्यो साँच्चै झूझारु हुनुहुँदो रहेछ यहाँका प्र.अ. । पदयात्राको बारेमा कुरा भईसके पछि हामी अगाडि बढ्यौ ।
यात्राकै क्रममा भेटिनुभएका राजेन्द्र गड्तौलाले हामीलाई चिसो पेय पदार्थ (कोल्ड ड्रिंक्स) दिएर सहयोग गर्नुभयो । त्यस्तै बाटोमै भेटिएकी भवानी गड्तौलाले पदयात्री साथी ज्ञानु बराललाई यस परिश्रमपुर्ण काममा समेल भएकोमा महिलाको नाम उच्च हुने भएकाले खुशी व्यक्त गर्दै धन्यवाद सहित आफूसंग भएको रु २०।– दिनु भयो । वहाँहरुको सहयोग हाम्रो निम्ति निकै महत्वपूर्ण छ ।
बाटोमै हिडीरहदा भेटिनुभएका मगरथ गुरुङ्गले यात्राको बारेमा सोधेका प्रश्नहरुको जवाफसंगै विवेकशील नेपालीको बारेमा बताएपछि वहाँ विवेकशील नेपालीबाट निकै प्रभावित भएको बताउँनु भयो । यात्राको सफलताको शुभकामना सहित रु १००।– सहयोग स्वरुप दिनु भयो ।
सुनाचरी आईपुग्दा त्यहाँ रहेको श्री राष्ट्रिय मा.वि.का शिक्षक–शिक्षिका कृष्ण थापा र सजिता उप्रेतीसंग भेट भयो । वहाँहरुले हेटौंडामा आफूले यस्तै टोली देखेको र सो हामी नै हौं या हैनौ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भयो । सो टोली हामी नै भएको थाहा पाए पछि वहाँहरु झन जिज्ञासु हुनुभयो । हामीले पदयात्रा र विवेकशील नेपालीको बारेमा जानकारी दिदै अन्तरक्रिया गरिसकेपछि विवेकशीलको विचार मनपराउदै सम्पर्क नम्बरहरु आदन–प्रदान भयो ।
करिब १ बजे तिर पिप्ले पुगेर आज दिउसोको खाना श्रेष्ठ क्याफे एण्ड रेष्टुराँमा खाईयो । पिप्लेमा रहेको यो रेष्टुराँ २०४२ साल देखि सेफ काम गरेका बुद्धि बा. श्रेष्ठको रहेछ । आफ्नो अलिकति मोटो शरिरका कारण बाहिर काम गर्न वा विदेश जान सहज नहुने जस्तो लागे पछि बरु गाँउकै यूवाहरुलाई सीप सिकाएर सक्षम बनाउँछु भन्ने अठोट लिएर लगभग १ वर्ष अगाडि देखि यो रेष्टुराँ शुरु गर्नुभएछ । करिब ७ जनालाई तालिम दिनुभएका श्रेष्ठले अहिले चै आफ्नो सम्पूर्ण परिवार सहित ६ जनालाई जगिर दिनुभएको रहेछ । तालिम लिएकाहरु कोही विदेश त कोही काठमाण्डौंमा गएर काम गरिरहेको वहाँले बताउनु भयो । खाना खाईसके पछि पुनः यात्रालाई निरन्तरता दियौ ।
चितवन जिल्लाको भण्डारामा पुग्दा धेरै सहयोगी ह्दयहरुसंग भेट भयो । स्थानिय परमात्मा सेढाईले पदयात्रा र विवेकशील नेपालीको विषयमा धेरै जिज्ञासु भएर सोध्नु भयो । कुरा हुँदै गर्दा वहाँले आफुसंग भएको रु.१००।– यात्राको सहयोगार्थ प्रदान गर्नुभयो । हामीले विवेकशील नेपाली लोकप्रिय भिडियो “नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होइन” को आवाज (अडियो) सुनायौ । एकाएक धेरै जना नजिक आउनुभयो । हामीले पदयात्राको बारेमा जानकारी गराए पछि भण्डाराका गुणराज कडेँल, पिपलकान्त ओली र रुद्र चौलागाँइले जनही रु ५०।– र नारायण बर्ताैला रु १५०।– सहयोग स्वरुप प्रदान गर्नुभयो । सहयोगी ह्दयहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट ।
चितवनको खैरेनी, बैरेनी हुदै ६ः३० तिर सिमलटाडीँ आइपुग्दा पानी प¥यो । केहीबेर ओत लाग्नु पर्ने भयो । फेरी अनुकुल लागे पछि यात्रा निरन्तर गरिन्थ्यो तर अलिकति अगाडि नपुग्दै फेरी ओत लाग्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
साँझ ७ः३० बजे हामी आजको बासको निम्ति चितवनको ज्यामिरे आईपुग्यौ । यहाँ सहयोगी बासु बुर्लाकोटीको निवासमा हामी सबै ८ जना पदयात्री को निम्ति खाना र बस्नको व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ । पदयात्री साथी विपिन त्रीपाठीको सम्पर्कबाट आजको विश्राम बासु बुर्लाकोटीकोमा भयो ।
आजको यात्रामा सहयोग गर्ने सबैजना प्रति आभार प्रकट गर्दै आज पदयात्री साथी विपिन त्रिपाठीको जन्मदिन परेकोले उनको सु–स्वास्थ्य, दिर्घायु एवं प्रगतिको शुभकामना ।
This entry was posted in Bagmati Zone, Bheri Zone, Janakpur Zone, Karnali Zone, Koshi Zone, Mahakali Zone, Mechi Zone, Narayani zone, Sagarmatha Zone, Seti Zone on May 17, 2013 by .